Weerar qarax ah oo lagu fashiliyay degmada Luuq
LUUQ, Soomaaliya - Sarkaal katirsan laamaha amniga Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay fashiliyeen qarax Al Shabaab ay qorsheynaysay inay ka fuliso degmada.
Sarkaalkan oo la hadlay Warsidaha Garowe Online, ayaa xaqiijiyay in gacanta lagu dhigay Cali Cabdi Mursal iyo Maxamed Cabdi Saalax, kadib howlgal ciidamada ka sameeyeen xaafadaha degmada.
Raggan la qabtey ayaa qirtay inay kamid yihiin Al Shabaab, islamarkaana loo soo diray inay weerar argagaxiso ku qaadeen saldhigyada ciidamada militariga dowladda Federaalka ku leeyihiin magaalada.
"Ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa u suurta-gashy inay qabtaan labadan nin iyagoo qata walxaha qaraxyada laga sameeyo iyo hub kadib howlgal la sameeyay, iyadoo xogtooda laga helay bulshada," ayuu yiri Sarkaalkan la hadlay GO.
Lama oga goobta bartilmaameedka u ahayd raggan inay weerarka ka fuliyaan, balse waxay Saraakiisha sheegeen in wadaan baaritaano ku aadan inuu jiro weerar kale oo Al Shabaab la damacsan tahay Luuq.
Al Shabaab ayaa dhawaan weerartay degmooyinka ku dhaw xuduuda Kenya ay Soomaaliya wadaagaan, gaar ahaan Ceel Waaq, Beled Xaawo iyo Luuq, iyadoo dishay Askar katirsanaa ciidamada Jubbaland iyo dowladda Federaalka.
Al Shabaab oo looga adkaaday inta badan gobollada dalka, ayaa wali awooda inay fuliso weeraro joogta ah oo ay ku qaadayso magaalooyinka ay dowladda maamusho, iyadoo khatar amni ku ah gobolka oo dhan.
Soomaaliya: Hogaamiye Shabaab oo isku dhiibay dowladda
Soomaliya 17.02.2018. 00:29
Isasa soo dhiibadda hogaamiyahan ayaa kusoo beegmaya xilli ay socdaan...
Soomaaliya: Axmed Madoobe oo soo bandhigay qorshooyin cusub
War Saxaafaded 24.01.2018. 10:33
Al-Shabaab oo qorsheynaysa weerar ka dhan ah Kenya [Xog Sirdoon]
Afrika 15.10.2018. 10:59
Xiisad dagaal oo ka taagan degmada Ceel-Waaq
Soomaliya 08.06.2018. 19:40
Taliyaha Booliska Luuq oo la xiray
Soomaliya 29.07.2017. 12:40
Rag ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu dilay Koonfurta Soomaaliya
Soomaliya 22.03.2018. 11:01
Duqayn shacab lagu laayay oo ka dhacday Gedo [Fahfaahin]
Soomaliya 09.08.2018. 19:30
Waa sidee xaalada Buurdhuubo oo xalay Al-Shabaab la wareegtay?
Soomaliya 20.03.2018. 11:00
Nin ajnabi ah oo khal-khal geliyay Garoonka Muqdisho oo Xabsiga Dhexe la dhigay 23.01.2019. 17:48
Fahfaahin ku saabsan Qarax Gaari oo ka dhacay Muqdisho [Sawirro] 23.01.2019. 16:51
DEG DEG: Qarax Goordhow ka dhacay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay 23.01.2019. 16:10
Xubno katirsan Daacish oo Mareykanka lagu qabtey iyagoo Muqdisho kusoo jeeda 23.01.2019. 15:44
Sarkaal katirsanaa Xukuumadda Somalia oo Muqdisho lagu dilay 23.01.2019. 15:16
ONLF oo war kasoo saartey khilaaf Cagjar iyo dowladda dhexe ee Itoobiya 23.01.2019. 13:58